ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ်မှာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွ အတွက်လဲ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် ေတွကို ေြပာြပေပးပါလား ? - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ်မှာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွ အတွက်လဲ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် ေတွကို ေြပာြပေပးပါလား ?
ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာလံုးေတွနဲ့​ ​ပတ်​သက်​တဲ့​ ​အ​ချက်​အ​လက်​ေတွ​ ​ကို​ေြပာ​ြပ​ပါ​လား​။
asked Mar 31, 2010 in သိ​ေကာင်း​စ​ရာ by acwpadmin (3,230 points)
ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာလံုးေတွကိုလည်း Unicode Standard 5.2 ကို အေြခခံြပီး ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့က ဖန်တီး ေနပါတယ်။ ေလာေလာဆယ်မှာ ကရင် စာေပအတွက် (စေကာ ကရင်၊ အေရှ့ ပိုးကရင်၊ အေနာက် ပိုးကရင်စာ) ေတွ အတွက် ဖန်တီး ေပးထားခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသား ယူနီကုဒ် စာလံုးေတွဟာ စမ်းသပ်တဲ့ အဆင့်တခုကို ေရာက်ေနြပီမို့ မြကာခင်မှာပဲ ဧရာဝဘ်ဆိုဒ်က တဆင့် သံုးစွဲသူေတွ လက်ထဲကို ြဖန့်ချီေပးနိုင် ေတာ့မှာပါ။ တိုင်းရင်းသား စာေပ အတွက်ကိုလည်း အေကာင်းဆံုး ြဖစ်ေအာင် ေသေသချာချာ သုေတသနြပုြပီး သက်ဆိုင်ရာ စာေပနယ်က ပုဂ္ဂိုလ်ေတွ၊ ဘာသာေဗဒ ပညာရှင်ေတွ နဲ့ တိုင်ပင်ေလ့လာ လုပ်ေဆာင်လျှက် ရှိေနပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာလံုးေြပာင်း ပရိုဂရမ် font converter ေတွကိုလည်း လိုအပ်ချက်ေတွ အေပါ် အေြခခံြပီး၊ ြကိုးပမ်း ေပးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။